Malayshiyada Al-shabaab Oo Xiyiraad Saartay Xarumaha Ay Ku Leeyihiin Somalia Shirkadaha Xawaaladaha Iyo Telefoonada | Araweelo News Network (Archive) -
Malayshiyada Al-shabaab Oo Xiyiraad Saartay Xarumaha Ay Ku Leeyihiin Somalia Shirkadaha Xawaaladaha Iyo Telefoonada
Muqdisho(ANN)Kooxda Al-shabaab ayaa maanta albaabada u xidhay gebiahaanba xafiisyada ay Koonfurta iyo Badhtamaha Somalia ku leeyihiin shirkadda ugu weyn dhinaca
xawaaladda lacagaha ee Dahabshiil iyo sidoo kale shirkaddaha is-gaadhsiinta ee Nationlink iyo Telecom.
Lama garanayo ujeeddada rasmiga ah ee ay kooxda Al-shabaab u xidhay xafiisyada shirkaddahaa, hase yeeshee mas’uuliyiin ka tirsan shirkaddahan oo idaacada VOA-du ay la hadashay ayaa sheegay in xadhigaasi uu la xidhiidho kaddib markii shirkaddaha lagu amray inay bixiyaan lacag gaadhaysa 120 kun oo dollar oo ay kooxda al-Shabaab ku sheegtay inay tahay lacago Zako.
Xafiisyada shirkaddaha Dahabshiil, Nationlink iyo Telecom ee maanta kooxda al-Shabaab ay xidhay ayaa ku yaallaa Gobollada Jubbooyinka, Labada Shabeelle, Hiiraan, Bay, Bakool iyo Gedo oo ah meelaha ay kooxda Al-shabaab ku amar ku taaglayso
Shirkadda is-gaarsiinta ee Hormuud oo iyadu ka mid ah shirkaddaha ka howlgalla dhulka ay al-Shabaab ka taliso ayaan wax saameyn ah ku yeelan xadhigaa.
Dhinaca kale talaabadan noocan ah ee ay Al-shabaab kaga dalbayso lacagaha shirkadahaa ayaa ah mid aan hore looga baran, waxaana la rumaysan yahay inay tahay talaabo xidhiidh la leh arrimo siyaasadeed. Shirkadda ugu weyn xaawaladaha Soomaalida ee Dahabshiil ayaa ahayd mid doorka ugu weyn ka qaadatay abaaraha iyo macaluusha ka jirta Somalia, iyadoo ahayd shirkadii ugu horaysay ee keligeed deeqdii u horaysay u fidisay dadka macaluusha, abaaraha iyo dagaalada aafeeyeen oo ay ugu deeqday boqolaal kun oo dollar.